mubvunzo Mukupedzisira FSX
1 gore 8 ago #665 by jimidget
Ndine Dell ndiyo makore 5. Pandakaitenga, munhu akaitengesa akati yakanga ine kadhi kadiki yaive yakanaka neFSX. Yakanga isiri. Ndakatenga kadhi yemavhidhiyo maviri yakaita kuti zvive nani asi hazvina kunaka sezvandaida.
Yenguva yekutenga pakombiyuta idzva. Ndinoda kadhi yevhidhiyo yakanakisisa uye yegondohwe inogoneka. Dambudziko nderokuti kukwana kwangu $ 500. Izvo zvinotaurwa, ini handidi pechipatara, IE, kutarisa, keyboard uye mouse. Ndine zvose izvozvo. Ndinongoda shongwe.
Kuva akatendeseka, handizivi chaizvo zvandinoda. Ndiri kutamba mitambo, kwete muhutano hwekombiyuta, asi ndinoda chero rubatsiro rwaunogona kundipa.
1 gore 7 ago #682 by Joshrssmith
Zvichida uwane GTX 1050 Ti uye 8gb gondohwe uye ini kwete nechokwadi pamusoro pezvimwe zvinhu zvakadai seCpu. Sorry asi ini handizivi zvikamu zvakawanda zvisingasviki $ 500 pamwe chete
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: jimidget
1 gore 7 ago #704 by jimidget
1 gore 7 ago #705 by Amberdog1
Jim chete nokuda kwemashoko, FSX inonyanya kuvimba nemushanduri, hukuru huri nani. Kana iwe une 1gb kadhi yemafuta iwe uchaita zvakanaka. Ndinogona kukurudzira yakanaka i5 kana i7 7th gem processor. Tarisira izvi zvinobatsira ... AD
1 gore 6 ago #706 by JanneAir15
Asi iwe pawakataura zvekupedzisira FSX iwe unoreva kuti uri kuwana payware addons zvakare. Nokuti ivo vari nani huri nani (kazhinji) vanoda bhajiro rakanakisisa kadhi. Iwe unogona kupindura izvozvo ndisati ndakurudzira chimwe chinhu here? Uye sezvo amberdog1 ichiti CPU yakanaka inofanirwa kana iwe uchida kushanda zvakanaka.
1 gore 6 ago #719 by jimidget
Ndinokutendai nokuda kwemashoko. BTW, ini ndiri mukana wokuti vatiye mubhadharo pamutengo wakatarwa. Ndanga ndakatarisa paEbay nokuda kwemashini kuti ndiite shanduro yakazara yeFSX.
Kana ukawana mukana, unogona kutarisa Ebay uye undibatsire kuwana imwe.
1 gore 4 ago #786 by superskullmaster
Jimidget akanyora: Ndinokutendai nokuda kwemashoko. BTW, ini ndiri mukana wokuti vashandise mubhadharo pamutengo wakatarwa. Ndanga ndichitsvaga paEbay nokuda kwemashini kuti ndiite shanduro yakazara yeFSX.
Sare inoguma mumazuva 3. $ 539.99 zviri nani hurry.
1 gore 4 ago #789 by xHobbit420x
ndakapedza $ 300 pane imwe pombi ye laptop yekutengesa zvakanakisisa uye inoshanda zvakanaka.
integrated graphics chip (izvo zvandichazovandudza pandichawana mari)
iwe unogona kuita izvozvo, uye upedze imwe $ 200 pane unyanzvi unowedzera pane nzvimbo.
kufanana naMegaEarthScenery. inofamba nehurumende. tanga neimba yako.
1 gore 3 ago #820 by sylvantino
Ndinongoda kupindira uye kugadzirisa mafungiro aya kuti chinhu chimwe chete icho chaicho chaicho chaicho chakanaka. Ndinoda kuratidzira zvimwe zvinhu zvinofanira kuonekwa kana uchigadzirisa kushandisa FSX kana P3D chero shanduro.
1. FSX uye P3D isati yasvika V4 iyo inonzi 64 bit, inowanzova nezvinetso zvizhinji nezvimwe zvinhu zvakafanana. Idzi ndiVAS, OOM uye Blurries.
2. ISSD haigoni kugadzirisa zvinetso zvekukanganisa kana zvekuyeuka. Uye hazvizogadziri DX 10 Preview kuvaka.
3 Unogona kuva nepurogiramu yakakurumidza pasi, asi haisi kuzogadzirisa chero ipi zvayo pamusoro apa.
Kuwanda kwechirangaridzo pamakadhi e-graphics uye kukwanisa kunokosha zvikuru. Kunyanya kuyeuka kadhi rine, zvishoma zvishoma zvaunenge uchienda.
Zvadaro kune DX10 fixer, iyo vamwe vanopika nevamwe uye vanoramba vachibata DX10 vachida kuramba vari paDX9.0c yekare saka vane matambudziko maduku, asi neDX9.0c une nguva yakakura yeVAS neOOM.
Ichocho chinhu pamusoro peFSX uye chokwadi chave chave nacho kwatiri kwemakore anopfuura 10, ndeyekuti inogara ichitsvaira mishonga yedu kusvika pakuguma kuitira kuti tigone kuiwana kune zvakanakisisa sezvatingaita izvo zvisingatomboitiki. Icho chinonyanya kuve nekuva nekodzero yepamusoro, zvichida skylake i7 7600 (6700k inofarira kuvaka yeprojekisera uye inononoka kudarika chaiyo i7 6700 nemamwe margin (chero purogiramu iyo inotevera iyo inovaka shure uye inononoka) , runomhanya pamwe ne1060 / 1080 8-16GB padhigiramu yemakadhi yemakadhi. (shanyira p3d site uye uone zvavanoda, ivo vakanyanya mhuka imwechete ine interface yakasiyana unil v4) Kubvira FSX iri 32 bit, wako kuenda kunenge uchishandisa zvinopfuura 2GB yekuyeuka panguva ipi zvayo kubva muhurongwa .. Fast processor (quad, kukanganwa chero zvishoma, pamutengo waunogona kuzvitenga iye zvino) uye pakati pepamusoro pezera rekadhi kadhi. Nvidia Grapics yakaisvonaka yakakunda graphics battle over amd yekupedzisira ye4 makore asingazivikanwi.
Panguva iyo pane kushaiwa kwechiyeuchidzo, saka kutenga kadhi kadi yekamuti ine kukwana kuvhara pabhodhi kubvisa zvinetso zveVAS hazvizove zvisingabhadhari, ndinogona kubatisisa kusvikira mushure megore idzva, uye kuona kuti zvinhu zvakamira sei pakutenga mifananidzo kadhi (ndingadai ndisingabve munzira yangu kuti ndiparadze $ 500, ramba uchichengetedza uye utenge mapeji ekupedzisira makadhi kadiki akawanda ane chiyeuchidzo, nokuti chero ipi zvayo inenge yakakosha, yakagadziriswa inobva ku skylake i7 series yaizoenda ).
Time chokusika peji: 0.420 mumasekonzi